Home News Wararkii ugu dambeeyay kulamo kala duwan oo ka socda Kismaayo
Kulamo kala duwan oo looga hadlaayo Khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadda ayaa wali ka socda Magaalada Kismaayo ee Caasimadda KMG ah ee maamulka Jubbaland.
Gudoomiyaha Aqalka Sare ayaa xalay kulan la qaatay Mas’uuliyiinta ugu sareysa maamulka Jubbaland sidda Madaxweynaha, ku xigeenadiisa iyo golaha Wasiiradda Jubbaland.
Kulankaasi ayaa looga hadlaayay sidii loo gabagabeyn lahaa Khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka Jubbaland oo gaaray Meeshii ugu sareysay.
Maamulka Jubbaland ayaa wali wadda eedeyn ka dhan ah Madaxda ugu sareysa dalka sidda Madaxweynaha.
Gudoomiyaha Aqalka Sare ayaa lagu waddaa in uu maanta soo gabagabeeyo Safarkiisa, islamarkaana uu shaaciyo waxyaabihii kasoo baxay Kulamadii Magaalada Kismaayo.
Previous articleMaxaa laga filan karaa Doorashadda K/galbeed iyo faragelin Nabad iyo Nolol
Next articleAmisom oo dalbatay Taageero Xoogan
Qadar iyo Sacuudiga oo Marti-qaadyo isku diray Xili khilaaf xoogan uu...